विश्वको पहिलो सौर्य उर्जाबाट चल्ने एसयूभी, जान्नुहोस् यसका विशेषता ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
२९ चैत्र २०७७, आईतबार ००:००
फुल चार्जमा ८०० किलोमिटर दुरी तय गर्ने विश्वको पहिलो सौर्य उर्जाबाट चल्ने एसयूभी सार्वजनिक भएको छ । केही कम्पनीले यस्तो इलेक्ट्रिक कार बनाउन लागेका छन्, जसलाई चार्ज गर्नको लागि चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्दैन । यस्ता कारले आवश्यक बिजुली आफै उत्पादन गर्छ ।
क्यालिफोर्नियाको स्टार्टअप कम्पनी हम्बल वानले इलेक्ट्रिक एसयूभी सार्वजनिक गरेको हो जसको ब्याट्री सोलार प्यानलबाट चार्ज हुन्छ ।
कम्पनीले सो कारको छतमा सोलार प्यानल जडान गरेको छ । सो ब्याट्री निकै तीव्र गतिमा चार्ज हुन्छ । कारको छतमा जडान गरिएको सो सोलार प्यानल पार्किङमा कार पार्क गर्दा आफै खोलेर आउँछ जसले गर्दा कारको ब्याट्री चार्ज हुन्छ ।
ब्याट्रीमा पर्याप्त चार्ज भइसके पछि सोलार प्यानल स्वतः फोल्ड हुन्छ । सो कारको ब्याट्री १ देखि २ घन्टाको चार्जमा ८० देखि ९० किलोमिटरको दुरी तय गर्छ ।
कम्पनीका अनुसार हम्बल वान फुल चार्जमा ८०० किलोमिटरको रेन्ज तय गर्ने क्षमता रहेको छ । सो कारले १०२० बीएचपीको पावर प्रदान गर्छ ।सो एसयूभीको लम्बाई ५०२९ एमएम रहेको छ ।
यो टोयोटा कोरोला भन्दा अलि लामो छ । सो एसयूभी टेस्ला साइबर ट्रकको तुलनामा केही सानो र ६८० किलोग्राम हल्का रहेको छ । सो कारको कुल तौल १८१४ किलोग्राम रहेको छ ।
हाल हम्बल वान एसयूभी डेभलपमेन्ट स्टेजमा रहेको छ तर भविष्यमा उत्सर्जन मुक्त कारको प्रतिनिधित्व गर्न कम्पनीले दावी गरेको छ । सौर्य उर्जाबाट चल्ने इलेक्ट्रिक कारले रिचार्ज गर्नुका साथै जीवाश्म इन्धनबाट उत्पन्न बिजुलीको निर्भरतालाई पनि यसले कम गर्छ ।
प्रकाशित मिति: Apr 11, 2021
यामाहाले आगामी मे १८ मा नयाँ बाइक आर ७ को ग्लोबल डेब्यु गर्ने भएको छ
ओमानको मस्कटबाट ६०० थान अक्सिजन सिलिण्डर नेपाल एयरलाइन्सले ल्याउने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको
महिन्द्रा मराजो एमपीभी र केयूभी १०० एनएक्सटी माइक्रो एसयूभीको उत्पादन बन्द हुने भएको छ ।
रेनोको पहिलो इलेक्ट्रिक एसयूभी चाँडै लन्च हुँदै, यस्ता छन् बिशेषता जान्नुहोस् !
रेनोले कम्पनीले पहिलो इलेक्ट्रिक एसयूभी मेगेन ई-टेक लन्च गर्ने तयारीमा लागेको छ । फ्रान्सको कार
हस्कभर्नाले नयाँ स्कुटर भेक्टर ल्याउदैँ, यस्तो छ बिशेषता !
हस्कभर्नाले नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर हस्कभर्ना भेक्टरको कन्सेप्ट भर्सन सार्वजनिक गरेको छ । स्वीडिस कम्पनी हस्कभर्नाले
केटीएमले नयाँ ७५० ड्युक मोटरसाइकल ल्याउदैँ
केटीएमले नयाँ ७५० रेन्जमा मोटरसाइकल ल्याउने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको अफिसियल इन्भेस्टर प्रिजेन्टेसनमा यो